दोहोरो अंकले ओरालो लाग्यो सेयर बजार, ६ अर्बको कारोबार
निशान न्युज आश्विन १०, 2078
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । बजार आज ६१ दशमलव २७ अंकले ओरालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक २ हजार ७ सय ५८ दशमलव ४८ को विन्दुमा झरेको छ । राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १० दशमलव ७० अंकले घटेर ५ सय १९ दशमलव ३६ को विन्दुमा झरेको ...
दशैँ तिहारलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँमा...
आश्विन ९, 2078 काठमाडौँ । दशैँ तिहारलाई लक्षित गरेर यसवर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा ६० हजार खसीबोका ल्याइने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा हुने मासुको खपत आकलन गरी पशुसेवा विभाग र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खसीबोका भित्र्याउने त...
चाडपर्वको मुखमै सरकारले बढायो सार्वजन...
आश्विन ८, 2078 काठमाडौँ । सरकारले चाडपर्व नजिकिंदै गर्दा लामो दूरीका सवारी साधनमा लाग्ने भाडा बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले २९ असारको निर्णयअनुसार अहिलेको भाडा समायोजन गरेको जनाएको छ। विभागले यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत, पहाडी ब...
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आज ?
आश्विन ८, 2078 काठमाडौँ । बजारमा शुक्रवार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ भने चाँदीको मूल्य बढेको छ । यस दिन छापावाल सुन प्रति तोला ८९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन यस्तो सुन प्रति त...
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुस...
आश्विन ७, 2078 काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहिबार सुनको मुल्य घटेको छ । बुधबार प्रतितोला ९० हजार १ सयमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा पाँच सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८९ हजार ६ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघल...
‘कालोधन’ शुद्धीकरणकाे पक्षमा ल्याइएको...
आश्विन ७, 2078 काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको नयाँ बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरे त्यस्तो लगानीको आयस्रोत नखोजिने विषय विवादमा परेको छ । कतिपयले यसलाई ‘कालोधन’ शुद्धीकरणको पक्षमा गरिएको व्यवस्था भनेर चर्काे आलो...
आश्विन ६, 2078 काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ९ सय रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार सुन तोलामा ९ सयले बढेर ९० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ। मंगलबार सुन तोलाको ८९ हजार २ सय कायम गरिएको थियो । तेजावी...
साहस ऊर्जाको आईपीओ आजबाट बिक्री खुला,...
आश्विन ६, 2078 काठमाडौं । साहस ऊर्जा लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) आज (बुधबार) देखि निष्काशन तथा बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले १०० अंकित मूल्यका ७० करोड रुपैयाँबराबरको ७० लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये ३ प्रतिशत अर्थात्...
आश्विन ५, 2078 काठमाडौँ । केही दिन लगातार घटेको सुनको भाउ आज भने केही बढेको छ । आज सुनको भाउ तोलामा ३ सय रुपैयाँले बढेर ८९ हजार २ सय रुपैयाँमा पुगेको छ । हिजो सुनको भाउ ८८ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो । यस्तै, आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा ५ रुप...
आश्विन ५, 2078 काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) ले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको असोज ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णयानुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सञ्चित मुनाफाब...
आश्विन ४, 2078 काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य रु दुई सयले घटेको छ । छापावाल सुन आइतबार रु ८९ हजार एक सयमा कारोवार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ८...
आइतबार कति छ सुनचाँदीको मूल्य ?
आश्विन ३, 2078 काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन आज आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । आज सुन गत शुक्रबारकै मूल्य प्रतितोला रु ८९ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ८८ हजार ६५० रुपैयाँ का...
आश्विन १, 2078 काठमाडौँ । शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ४ सय रुपैयाँले घटेको छ । बिहीबार ९० हजार पाँच सय रुपैयाँमा तोलामा खरिदबिक्री भएको छापावाल सुनको आजको मूल्य ८९ हजार एक सय रुपैयाँ छ । आज तेजावी सुनको कारोबार मूल्य ८८ हजार ६५०...
एकैदिन ७०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्...
भाद्र ३१, 2078 काठमाडौँ । हप्ताको पाँचौ दिन आज बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । आज सुन एकैदिन ७०० रुपैयाँले घटेको हो । हिजो बुधबार ९१ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज एकैदिन ७ सय रुपैयाँले घटेर ९०...
दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार, कारोबा...
भाद्र ३०, 2078 काठमाडौँ । नेपाली बजारमा मंगलबार दोहोरो अंकले घटेको शेयर कारोबार बुधबार पनि दोहोरो अंकले नै घटेको छ । नेप्से परिसूचक ४० दशमव २६ अंकले घटेर २ हजार ८ सय ८९ दशमलव ०३ अंकमा झरेको छ । बुधबार १ दशमलव ३७ प्रतिशतले बजार घटेको हो...